Hire Purchase – IMF
Hire Purchase (အငှားဝယ်ယူစနစ်)
လူကြီးမင်းတို့ပိုင်ဆိုင်သောရုံးခန်း၊ အိမ်တို့တွင်လိုအပ်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် အခြား ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေများထုတ်ချေးပေးပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ IM Finance နှင့်စာချုပ်ချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ၊ ဆိုင်များမှမိမိလိုအပ် သောပစ္စည်းများကို အငှားဝယ်ယူစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
မိမိဝယ်ယူလိုသောပစ္စည်းများကို ဦးစွာရောင်းချသည့်ဆိုင်များတွင် ၀ယ်ယူမည့်ပစ္စည်းရွေးချယ်ပြီး ၎င်းဆိုင်မှပေးပို့သည့် ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့လွှာနှင့်အတူ IM Finance တွင်လာရောက်လျှောက်ထား ရပါမည်။
လူကြီးမင်းချေးငွေချေးယူရန်အတွက် အာမခံမည့်သူ(၂)ဦးလိုအပ်ပါသည်။ ချေးငွေလျှောက်ရာတွင် လျှောက်ထားသူ၏၀င်ငွေကိုဖော်ပြရပါမည်။ ၀န်ထမ်းဖြစ်ပါက ၀န်ထမ်းဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံစာနှင့် လစဉ်ဝင်ငွေအထောက်အထား၊မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ၊အိမ်ထောင်စုစာရင်း၊ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင် ကြောင်းထောက်ခံစာတို့ကိုပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။
အတိုးနှုန်းများမှာလူကြီးမင်းဝယ်ယူသည့်ပစ္စည်း၏ ၃၀%ကိုကနဦးပေးသွင်းငွေအဖြစ် IMF Co.Ltd., သို့ပေးသွင်းရပါမည်။ လက်ကျန်ငွေ ၇၀%ကို(၆)လ သို့မဟုတ် တစ်နှစ်အတွင်းပြန်လည် ပေးဆပ်ရ ပါမည်။အတိုးနှုန်းမှာ ၁၈% ဖြစ်ပါသည်။ လစဉ်အတိုးအရင်းအရစ်ကျငွေကိုလစဉ်လဆန်း(၁)ရက်နေ့ မှ(၄)ရက်နေ့အတွင်းပေးသွင်းရမည်။
IM Finance is offering Hire Purchase for you and your owned office, home, luxurious items and other businesses.
The applicants have the chances to conduct and shop your goods of life at IM Finance’s authorized dealers, companies and suppliers.
The applicants must come and apply at IM Finance together with invoices of IMF’s dealers.
The applicant and two guarantors must submit the original & duplicated National Registration Card (NRC), original & duplicated Household census and original Ward Administration Office of Residential Recommendation Letter.
If applicant isacompany staff, must attach the staff recommendation letter, income recommendation and Job appointed letter from his/her organization.
After your applied Hire Purchase is approved by IM Finance, the applicant must firstly deposit 30% of amount and the rest of 70% would be deposited with monthly interest 18% as repayment. The repayment period is 1st-4th of every month. The loan period are6months and 12 months. This is depend on applicant’s choice.
IMF opening ceremony
Jonathan on Chairman’s speech
Phyo Wai Khaing on Chairman’s speech
Imperial Myanmar Finance
Your Best Alliance
No-49, Moe Kaung Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar.
+951578739, +959404099910, +959404099920